मनकारी घरबेटी जस्ले दिए लकडाउनमा घर भाडा छुट, बैंकले भने तागेता गर्दै - Sainokhabar
होमपेज / बैँक / वित्त / मनकारी घरबेटी जस्ले दिए लकडाउनमा घर भाडा छुट, बैंकले भने तागेता गर्दै
मनकारी घरबेटी जस्ले दिए लकडाउनमा घर भाडा छुट, बैंकले भने तागेता गर्दै
आइतबार, असार १४, २०७७ , साइनो खबर
“नेपाली नेपाली हामी नेपाली, मधेस होस या पहाड हामी नेपाली” गायक साजन राईको गितले भनेझै नेपालमा बस्ने सबै नेपाली हृदयका दयालु छन । एक नेपालीलाई समस्या पर्दा अको नेपालीको मान चुपचाप रहन सक्दैन । “पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नु पर्छ आधि आए तराईमा पहाडले छेक्नु पर्छ” भनेर एक भुगोल र अर्को भुगोल विचको मित्रतालाई जोडेको छ । यति खेर नेपालीले नेपाली र एक भुगोलले अर्को भुगोललाई सहयोग गर्ने बेला छ ।
एक आपसमा मिलेर बसेका नेपाली नेपाली विच कति एकता छ भन्ने यो ३ महिनाको लकडाउनले देखाएको छ । लकडाउन सुरु भएको एक साता वित्न नपाउदै आफ्ना वरिपरिका विपन्नलाई राहत बाढ्न निस्कीएका नेपालीहरु यो समयमा घर भाडा छुट गरेर उदाहरणीय बनेका छन ।
देशको ठुलो अर्थतन्त्र ओगटेको बंैकहरुले लकडाउनको समयमा पनि कर्जा बुझाउन तागेता गरिरहेको समयमा घर भाडा छुट गरिदिएर नेपाली उच्च रहेर स्वाभिमान कायम राखेका छन ।
३ महिना भन्दा लामो लकडाउले दैनिक रोजिरोटी गर्दै घर चलाउने विपन्न परिवार देखि व्यापारी ब्यावसायीहरु समस्यामा रहेका छन । सरकारले लकडाउको समयमा एक अर्कामा सरसहयोग गर्न आवहान गरे पनि बैकहरु भने पञ्चायत कालका मुखिया र साहु जस्तै गरि सावाँ, ब्याज तिरे छुट भन्दै समस्या माथि समस्या थोपर्न थालेका छन ।
लकडाउनको समयमा विपन्न परिवार र सा–साना ब्यापार ब्यावसाय गर्ने सर्वसाधारणले दैनिकी कसरी चलाउने भनेर चिन्ता भै रहेको बेला बैकहरु पञ्चायतकालका मुखिया र साहु भएर पिडा थपिदिएका छन ।
बैंकको पिडामा सानो भए पनि मलम पटि लगाउदै हौसला बढाएका छन केहि घर धनिहरुले । कति मनकारी घर बेटिले लकडाउन भरीको पुरै घर भाडामा छुट गरेका छन भने कतिले राज्यले आवहान गरे अनुसार १ महिना छुट दिएका छन । लकडाउनको समयमा बैंकवालाले दिएको समस्यामा घरबेटीबाट भाडामा पाएको छुटले ठुलो हौसला बढाएको विपन्न परिवार र साना ब्यावसायीहरु बताउछन
तर भाडा छुट गर्नेकै भिडमा “समस्या मलाई पनि छ मेरो समस्या कस्ले हल गरि दिन्छ” भन्नेको पनि कमी छैन । बैंकले छुट दिएपो मैले छुट दिनु भन्नेहरु पनि प्रसस्तै छन । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको पथरी बजारमा धेरै घर धनिहरुले ब्यावसायीको मार्का बुझि भाडा छुट रिदिएका छन । पथरीबजारकी जुनी थपलिया भन्छीन “ब्यापारी टिके हाम्रो घरमा ब्यापार चल्लने हो” यो बेला ब्यापारीलाई समस्यामा पारे ब्यापार छोड्लान, सबै ब्यापारीले ब्यापार छोडे पथरीको ब्यापार कसरी चल्छ ?
लकडाउनले जनजिवन प्रभावित हुना साथ पहिलो पटक घरभाडा छुट गर्ने घोषण पथरीकै पशु मिश्रले गरेका थिए । त्यस्तै पथरीशनिश्चरेका पुराना ब्यावसायी तथा समाजसेवी नरहाङ राईले लकडाउन अबधिभरको कोठा भाडाको रकम नलिने घोषणा गर्नु भयो। त्यस्को लगतै पथरीका रत्न साउदेनले २ महिनाको भाडा छुट गर्नु भएको थियो ।
जुनि थपलिया, नरहाङ राई, पशु मिश्र र रत्न साउदेन जस्तै पथरी बजार आसपासका घर धनिहरु दुर्गा प्रसाद भट्टराई, टिका थपलिया, रामबहादुर रायमाझी, चन्द्र गरगाई, रमेश चेम्जोङ, टिका आचार्य, कुलबहादुर गुरुङ, मोना लिम्बु, युवराज थापा चन्द्रकला सुब्बा, डिल्ली पराजुली, टिका दंगाल लगायत धेरैले १ महिना देखि लकडाउन भरीको भाडा छुट गनुभएको ब्यावसायीहरु बताउछन । त्यस्तै बुद्ध चौकका भुपाल श्रेष्ठ, पदम कुमारी तामाङ लगायत धेरै घर धनिहरुले भाडा छुट गर्नु भएको छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण विश्व नै आर्थिक अर्थतन्त्रमा गिरावट भको छ । ३ महिना लक डाउनले समस्या भएको बेला बिमा कम्पनीहरु फोन गर्छ “बिमाको पैसा तिर्ने समय असार मसान्त सम्म हो” भन्दै । बैकहरु ब्याज बुझाउनु भए यति छुट र उति छुट भन्दै फोन गरेर तागेता गर्छन । ब्यापार बन्द भएको ३ महिनामा कसरी तिर्नु किस्ता ? ब्यापारीहरुको गुनासो छ । बिमा त आफ्नो भविष्यको लागि हो अहिले बाच्न गाह्रो छ भविष्यलाई कस्ले सोच्छ ? विमित ब्याक्ती बताउछन ।